Global Voices teny Malagasy » Tondradrano Ao Indonezia : Fepetra Hamehana Ao Jakarta · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 19 Janoary 2013 2:14 GMT 1	 · Mpanoratra Juke Carolina Nandika avylavitra
Sokajy: Azia Atsinanana, Indonezia, Mediam-bahoaka, Tontolo_iainana, Vaovao Mafana, Voina
Nataon'ny tondradrano goavana fahirano i Jakarta, renivohitr'i Indonezia. Napetraky ny Governora Joko Widodo ho amin'ny toeran'ny hamehana  ny renivohitra hatramin'ny 27 Janoary. Voatatitra fa amin'ireo sobadistrika 44 ao Jakarta dia 27 no tondraky ny rano. Mampiasa ny tenifototra #banjirJKT  (tondradranon'i Jakarta) ireo mpisera ety anaty aterineto mba hizaràna vaovao mikasika ny fivoaran'ilay tondradrano any amin'ny distrika samihafa.
@Posma_  Samy miatrika ny fanamby henjana ao Jakarta na i Jokowi (Ben'ny Tanàna) sy Ahok (Lefitry ny Ben'ny Tanàna). Ity no ilay antsoinay hoe tondradrano isaky ny dimy taona. Enga anie, mba ho vahaolana milamina no ho hita. #banjirJKT
@cewequat  Mandraisa anjara amin'ny #berbagiselimut (mizarà bodofotsy). Ampio ny mpifanolobodirindrina aminao na iza na iza. Azontsika atao ny manampy ireo mizaka ny mafy amin'ity tondradrano ao Jakarta ity.
Johannes Silentio  Tato anatin'ny andro vitsy, nipoitra ny endrika miafin'i Jakarta. Tanàn-dehibe maoderina ratsy tantana nandritra ny fotoana naharitra sy azon'ny orana tsy nitsahatra indray alina monja nokendaina.
@BLUTransJakarta : Ialànay tsiny ny filazàna fa amin'izao fotoana dia tsy afa-mandeha daholo noho ny tondradrano sy ny làlana tsy azo aleha ny fiara fitateram-bahoakantska rehetra.
Jennie S. Bev  Be ny zavatra mila foanana androany, hatramin'ireo fihaonana mikasika fandraharahàna. Tafakatra hatramin'ny 3 metatra ny rano amin'ny faritra sasany. Ratsy ihany koa ny fifandraisana aterineto. Miray fo amin'ireo rehetra tra-boina aho.
‏@kalamkata  Tondraka ny lalambe mahitsy mamakivaky ny tanàna. Hatreny amin'ny valahan'ireo fiara kely.
Nangonina ao amin'ny Pinterest  ihany koa ireo sarin'ilay tondradrano. Mandritra izany, Dest , mpampiasa Google dia nanangana sarintany Google  iray hanarahana ilay tondradrano goavana ao Jakarta. Ireto ambany ireto ny fanehoankevitra sasany tao amin'ny twitter sy ireo fanavaozam-baovao mikasika ilay tondradrano :
‏@DianOnno  Sahala amin'ny hoe manampy amin'ny famonjena ireo biby tra-boina amin'ny tondradrano ao Jakarta ny Jakarta Animal Aid Network (JAAN). Mifandraisa amin'izy ireo raha misy ilànao fanampiana.
@Oepaij  Ireo faritra nomanina hivarinan'ny rano amin'izao fotoana no efa lasa tanàna misy mponina. Izany dia toy ny filazàna amin'ny olona hanangana trano eo amboninà honahona.
@Ngelantour  Refesina aminà ‘cm’ na ‘metatra’ ny haavon'ny tondradrano eran'izao tontolo izao. Ao Indonezia ihany izy io no refesina amin'ny ‘mata kaki, betis, dengkul, dada, pinggang, leher’ (hakitrokely, ranjo, lohalika, valahana, tratra ary tenda).
‏@KartuPos  Bibilava be tsikaritra teo anoloan'ny sekoly Saint Ursula akaikin'ny Lapangan Banteng (fanamarihana: kianja fanaovana fanatanjahantena). Avy eny amin'ny Làlana Dari. @BeckTum: pic.twitter.com/JJZ6SYfo 
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2013/01/19/44760/
 toeran'ny hamehana: http://www.thejakartaglobe.com/home/jakarta-in-emergency-status-until-jan-27/566042
 ‏@kalamkata: https://mg.globalvoices.org https://twitter.com/kalamkata/status/291770720692887552
 sarintany Google: https://maps.google.com/maps/ms?t=m&msa=0&msid=210646426167132067981.0004d362a5c9e6ca592eb&ie=UTF8&source=embed&ll=-6.152331,106.745868&spn=0.011456,0.021136